Khabiir Kala Duwan: Sawir SEO ah iyo Fursado ay bixin karto
Fiidiyeyaasha iyo sawiradu waxay bixiyaan khaas ah farsam-raadin fursadaha dejinta iyo ka caawinta boggagaaga in ay u diraan calaamado kala duwan oo ah Google, Bing, Yahoo iyo makiinadaha kale ee raadinta. Mashiinka raadiyeyaasha raadinta ayaa qiimeeya qoraalka sawirada oo ku xira boggaaga. Ma aha oo kaliya inay fahmaan oo muujiyaan qoraalka sawirada si sax ah laakiin sidoo kale waxay u isticmaalaan inay yihiin ilaha hagitaanka ee muhiimka ah ee muhiimka ah ee bogagga gaarka ah - construtor de site joomla. Sawirrada sawiradu waa mid toos ah, waxaana jira siyaabo dhowr ah oo lagu daro cabitaan SEO dheeraad ah sawirada.
Sawirka hoose ee sawirku wuxuu siinayaa qalabka raadinta raadinta si cad oo sawirradaada ah. Tags waxay ku caawisaa Google fahamsan dabeecadda iyo macnaha sawirkaaga waxaana loo isticmaalaa akhristayaasha. Qodobbada qodobbada waxay u adeegaan labadaba shaqooyinka la heli karo iyo isugeynta raadinta mashiinka . Taasi waa sababta aad u xoogga saari laheyd qorista sawirada saxda ah ee saxda ah kuna dar mawduuca muhiimka ah ee muhiimka ah. Qodobbada hoose ee saxda ah waxay bixiyaan macnaha ereyo muhiim ah oo loogu talagalay boggaga waxayna ka caawiyaan sawiradaada inay sare u kacaan raadinta sawirka.
Oliver King, oo ah Sare Maamulaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegaya in aad haysatid sawirrada qoraalka ka yar oo ka hooseeya 130 erey oo iska ilaali walxaha muhiimka ah..Hubi in qoraalka uu muuqaal ahaan u muuqdo oo uu si kooban ugala hadlo waxyaabaha aad ka kooban tahay. Isla mar ahaantaana, waa inaad xakameysaa xajmiga sawirada lagu dhajiyay iyo ka fogow isticmaalka alaabta alaabta sawirada sawireedka sida sawirrada asalka ah iyo shimbiraha ama sawirada xayawaanka. Si loogu daro darajooyinka hoose ee Weebly, waa inaad ku dhajisaa sawirada serverka oo guji 'Advanced> Sub Options'
Qoraal digniin ah oo ku saabsan mawduucaaga, Google waxa uu eegayaa qoraallada si uu u fahmo dabeecaddaada. Qoraal sawir ah ma aha shuruudaha SEO, laakiin waxay ku fiican tahay boggaga guud ee kalsoonida iyo muuqaalka. Waxaa suurtagal ah in lagu daro sawir muuqaal ah ee Weebly. Tani waxay tahay, waa inaad sawirada ku dhejisaa oo aad dooratid ikhtiyaarka Xariga
URL-yada sawirada iyo faylalka:
Waa muhiim inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee magacaaga, waana mid ka mid ah hababka ugu fiican ee SEO. Google iyo makiinadaha kale ee raadinta waxay eegaan faylka faylka ee sawirrada waxayna kugu caawinayaan inaad ku darto qiime guud ee guud. Waxaa intaa dheer, waxay noqoneysaa mid sahlan in webmasters si ay u helaan sawiradooda ku jira raadinta muuqaalka Google, baabuur badan iyo baabuur badan oo ku socda boggooda internetka. Markaad sawir ku dhexjirto Weebly, hubso in URL uu la socdo faylalka. Sidan, URL-ka sawirku wuxuu u eg yahay www.abc.com/yourfilename.jpg. Waa mid ka mid ah sawirrada ugu muhiimsan SEO-ga iyo in loo isticmaalo si joogto ah.
Cabbirka sawiradaada waa inuu noqdaa mid macquul ah waana inuu waafajiyaa waxyaabaha ku jira boggaaga. Haddii aad haysatid sawirro yaryar oo yar, waxaad dib u dhigi kartaa iyaga oo isticmaalaya qalab sida Preview for Mac iyo kuwa kale. Inta badan, dadka sawirada sawirada si ay u siiyaan aragti dheeraad ah oo faahfaahsan. Qalab badan oo qalab ah ayaa laga heli karaa internetka kaas oo kaa caawin kara inaad dib u habeyn iyo beddesho sawirradaada. Sidoo kale, Weebly waxay si otomaatig ah u dajisaa sawiradaada iyo sawirada cinwaanka si aad u sarreeya, sidaas darteed uma baahnid inaad ka welwesho dib u dajinta tiro badan oo sawirro ah